Don't Starve: Pocket Edition 1.11 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.11 လြန္ခဲ့ေသာ2လက
ဂိမ္းမ်ား စြန္႕စားခန္း Don't Starve: Pocket Edition
Don't Starve: Pocket Edition ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
ငတ်မနေပါနဲ့: Pocket Edition ကို, အန်းဒရွိုက်မှသန်း6ကျော်ကစားသမားအားဖြင့်ပျော်မွေ့့ထိခိုက်မှုကို PC ဂိမ်းတတ်၏။
ယခုတွင်သင်သည်သွားလာရင်းသိပ္ပံနှင့်မှော်အပြည့်အဝဟာအလျှော့တောကန်တာရှင်သန်မှုဂိမ်းတွေ့ကြုံခံစားနိုငျပါသညျ! Wilson ကပိတ်မိကာလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်များကိုတော၌ကမ္ဘာပို့ဆောင်ထားပြီးသူသတ္တိကောင်းတဲ့လူကြီးလူကောင်းသိပ္ပံပညာရှင်အဖြစ် Play ။ သူကအစဉ်အဆက်မှလွတ်မြောက်ရန်နှင့်အိမ်ပြန်သည်မိမိသွားရာလမ်းကိုရှာတွေ့ဖို့မျှော်လင့်လျှင် Wilson ကမိမိအပတ်ဝန်းကျင်နှင့်၎င်း၏ပြည်သူပြည်သားတို့ကိုအမြတ်ထုတ်ဖို့သင်ယူရပါမည်။
ထူးဆန်းတဲ့သတ္တဝါတွေ, အန္တရာယ်များနှင့်အံ့သြဖွယ်များအပြည့်အဝထူးဆန်းတဲ့နှင့် unexplored ကမ္ဘာကြီးကိုရိုက်ထည့်ပါ။ သင့်ရဲ့ရှင်သန်မှုစတိုင်ကိုက်ညီသောယာဉ်ပစ္စည်းများနှင့်အဆောက်အဦများမှအရင်းအမြစ်များကိုစုဝေးစေ။ သင်ဤထူးဆန်းတဲ့မြေ၏နက်နဲသောအရာပျက်ပြယ်အဖြစ်သင့်လမ်း Play ။
Don't Starve: Pocket Edition အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Don't Starve: Pocket Edition အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Don't Starve: Pocket Edition အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
pocro စတိုး 24 64.02k
Don't Starve: Pocket Edition ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Don't Starve: Pocket Edition အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 1.11
ထုတ်လုပ်သူ Klei Entertainment Inc.
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://forums.kleientertainment.com/privacy/
လက်မှတ် SHA1: 61:00:5D:61:14:26:D0:C5:AB:B8:1E:AA:BE:3C:79:03:75:CD:BC:90
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Klei Entertainment
Don't Starve: Pocket Edition APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ